कोरोना भा'ईर'समाथी रामगोपाल बार्मामाले बलिउडमा फिल्म बनाए(ट्रेलर) - Filmy News Portal Of Nepal
कोभिड १९ ले विश्व नै आ,क्रान्त बनिरहेको छ । विश्वका हरेक देश, त्यहांको सरकार र नागरिक कोरोना बि’रु’द्ध ल’डि रहेका छन् । ६० लाख को हाराहारीमा कोरोना संक्रमित पुग्दा ३ लाख बढीले कोरोनाकै कारण ज्याु’,न गु’माएका छन् ।
चीनको वुहानबाट शुरु भएको कोरोना यति बेला पश्चिमा मुलुक ह’टस्प’टको रुपमा देखिएका छन् । यसले सम्पूर्ण मनोरञ्जन क्षेत्र पनि ठ’प्प पारिरहेको छ । तथापी केही फिल्म मेकरहर आफ्नो श्रृजना पस्कने काममा व्यस्तछन् ।
फिल्म ‘कोरोना भा’इर’स’ ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । रामगोपाल वर्माले ट्वीटर ह्यान्डलमा एउटा तस्बिर सेयर गर्दे जानकारी दिएका छन् । निर्देशक रामगोपाल वर्माले निर्माण गरेको यस फिल्म तेगुल भाषामा निमार्ण भएको छ ।
रामगोपाल वर्माले ट्वीटर मार्फत स्टाटस लेख्दै ‘यो हेर्नुहोस् कोरोना भा’इर’सको ट्रेलर भन्दै लेखेका छन् । फिल्मको ट्रेलर :
राधे रो’किएपछी सलमानले गर्दैछन् यस्तो फिल्म
अस्पतालको प्रचार गरेको आ’रो’प लगाउनेलाई अमिताभको यस्तो जवाफ !
झु’टको फ’र्दाफा’स : शिशिर र सरु सुनुवार आ’क्रम’ण शै’लीमा आ’श्रममा पुगेपछी पुष्पा फ’रार? दिदिसंग च’र्काच’र्की(भिडियो)